Double pedestal desk – wood top with6drawers and keylock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သော အံဆွဲ (၆)ခုနှင့် ဘေးတိုင်ခုံနှစ်ခုပါရှိသည့် အပေါ်အခင်းပြားသစ်သားနှင့်စားပွဲခုံ။ Size: W150*D80*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၅၀၊ အနံ ၈၀၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ Central lock system, Top made from melamine wood in beach color. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်ပြီး၊ အပေါ်အခင်းပြားမှာ သစ်သားအထူးကြိတ်ပေါင်းသားဖြစ်ပြီး အ၀ါရောင်သမ်းသည့် ပန်းနုရောင်ဖြစ်သည်။